Semalt: Iiplagi ze-WordPress IiNzuzo
Iiplagizi ze-WordPress ziyona nto inomdla kwaye iluncedo kulindeleke kuyo nayiphi na i-webmaster okanye iblogger. Ngokusebenzisa i-plugin, abaphuhlisi bewebhu kunye nabaqulunqi banokufaka lula ukusebenza kunye nokusebenzisana kwisayithi ngaphaya komxholo wayo obuninzi oboniswe kuwo onke amaphepha. Ingaba kufuneka udale ifom elula, umdlalo wevidiyo, okanye i-bloam blockers kunye neziqulatho zomxholo, iiplagizi indlela elula kwaye enamandla yokwenza izinto zenziwe.
Lapha i-Ross Barber, ingcali ephezulu ye-10 (Semalt , ixoxe ngeenzuzo ezili-10 ezifanelekileyo kwiiplagi ze-WordPress.
1. Iiplagizi zilula ukusebenzisa
Iiplagizi ze-WordPress zilula ukuyisebenzisa kwaye zine-interface enembile eyenza ibe nenjongo kuzo zonke iindidi zewebhusayithi - human resources database software. Ungakwazi ukongeza kalula iiblogi zezithuba, imifanekiso, kunye namaphepha asebenzisanayo kwiwebhusayithi yakho kwaye konke oku kulula ukwenza, kuthatha imizuzu embalwa kwaye unciphise ixesha lokufometha.
2. Ukulula ukufikelela kuzo zonke izixhobo
Inxalenye engcono kukuba iiplagizi ze-WordPress ziya kufumaneka kuyo nayiphi na ifowuni. Kungakhathaliseki ukuba usebenzisa i-laptop okanye i-smartphone, unokukwazi ukuhlela ngokulula okanye ukufaka / ukusebenzisa i-plugin kwaye ufikelele kwiwebhusayithi yakho xa ixhunyiwe kwi-intanethi.
3. Akukho mfuneko yokuhlelwa kwe-HTML
Emva kokufakela iiplagiza ezifanelekileyo ze-WordPress, awudingi nawuphi umhleli we HTML okanye isofthiwe yeFTP ukwenza izinto zenziwe. Ezi iplagi zilungele ngokufanayo kwiziko le-static ne-non-static, kwaye akudingeki ukuba uhlele ikhowudi ze-HTML xa ufake ifowuni.
4. Iyahambelana neenjini zophando
Iiplagizi ze-WordPress ziyahambelana neenjini zokukhangela ngakumbi i-Google ne-Yahoo kwaye yenza kube lula kuwe ukuphucula ukusebenza kwendawo yakho. Ukongezelela, onke amaphepha, imifanekiso, izithuba, izihloko kunye neenkcazo zifumana i-indexed
5. Lawula iwebhusayithi kwaye utshintshe ukujonga kwayo
Uninzi lwewebhumasters kunye neebloggers abanalwazi lokuba iplagin ye-WordPress inokubanceda batshintshe ukuma kweendawo zabo. Kuthetha ukuba ungasebenzisa iiplagi ezininzi kangangoko kunokwenzeka kwiiwebhsayithi eziqhelekileyo nezingezona eziqhelekileyo.
6. Ukuyila ngokwezifiso
Enye yeemfuno eziphambili zabasebenzisi banamhlanje yi-customization. Sonke sijonga iiplati ezivumela ukuba sihlakulele amaziko amaninzi. Iiplagizi ze-WordPress zisenza sikwazi ukubandakanya abasebenzisi abaninzi nabasebenzisi kwiiblogi zethu nakwiwebhu.
7. Ukulungele ukusebenzisa
Kuyinyaniso ukuba iblolo ngokwalo ngumsebenzi onzima kwaye awukwazi ukukwazi ukuphuhlisa iifowuni zakho. Kwiimeko ezinjalo, ungakwazi ukufaka lula iplagi ye-WordPress kwaye uqalise kunye nomxholo wakho wewebhu. Bahlukeneyo kunye nemisebenzi, ngoko benze umsebenzi wakho ulungele kwaye ukhawuleze.
8. Ukuphucula imisebenzi ngokukhetha ngokufanelekileyo
Njengoko kukho uluhlu olubanzi lweefowuni ze-WordPress, kulula ukuba nabani na ukuphucula ukusebenza kwewebhusayithi okanye iblogi ngendlela efanelekileyo yokukhetha. Unokongeza ezininzi okanye iifowuni ezincinci kwisayithi yakho ngokusemandleni kwaye wenze ukuba zibukeke zibugcisa kwaye zibhetele kunaphambili.
9. Izicwangciso zikunceda ukukhula kwishishini lakho
Kuyi nyaniso ukuba iiplagi ze WordPress zinceda ukukhula kwishishini lakho. Ukuba isayithi lakho liyilwe ngobuchule kwaye libandakanya, kuyacaca ukuba iindwendwe ezininzi ziya kuba ngabahlali abonwabileyo.
10. Ukufumaneka kwabasebenzisi abaninzi
Njengomlawuli, unokongeza abaninzi abasebenzisi kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress njengoko ufuna. Unako ukubanika indima ezahlukileyo kwaye ubanike abaphathi abahlukileyo usebenzisa iiplagi ze-WordPress.